केपी ओली र प्रचण्डबीच वार्ता यस्तो आयो गोप्य सहमति – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
केपी ओली र प्रचण्डबीच वार्ता यस्तो आयो गोप्य सहमति
माघ २९, २०७४ १८:२६ मा प्रकाशित
esarokar २९ माघ, काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतालाई लिएर विभिन्न शंका उप-शंका व्यक्त भइरहेका बेला प्रमुख दुई नेता केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच निर्णायक वार्ता भइरहेको छ ।
‘छिट्टै पार्टी एकता’ को सन्देश लिएर आउछौं, निस्फिक्री रहनुहोस – प्रचण्ड-ओली आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई ढाडस दिन पछि परेका छैनन ।
माओवादी कार्यकर्ताहरु एकीकरण पछि आफ्नो वर्चस्व के हुने हो ? नयाँ पार्टी बने पश्चात् कसरी एक-आपसमा घुलमिल भएर काम गर्न सकिएला ? भन्ने जस्ता कुराले निकै नै चिन्तित बनाउन थालेको पाइन्छ । यद्यपि दुबइ पक्षका कार्यकर्ता बैज्ञानिक तवरले एकीकरण होला र अपनत्व स्विकार्दै विन-विन को फर्मुलामा रहन पाइएला भन्ने प्रचुर विश्वास बोकेर बसेका छन ।
पछिल्लो पटक एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादीलाई अध्यक्ष दिने र महासचिव एमालेले राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ०४७ मा माले र मार्क्सवादी एकीकरण गर्दा जस्तो सेरेमोनियल अध्यक्ष र शक्तिशाली महासचिव बनाउने उनको प्रस्ताव छ । यो फर्मुलाको पिरामिडमा एकीकृत भएको तत्कालीन नेकपा माक्र्सवादी र नेकपा मालेलाई हेर्ने हो भने त्यो तरिका एकदमै बैज्ञानिक र सफलता उन्मुख मान्न सकिन्छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एकताबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउछन् । उनले भने, ‘सरकार गठन अगाडि पार्टी एकताको प्रारुप तयार हुन्छ । सरकार गठन भएपछि केही समयमा नै पार्टी एकता घोषणा हुन्छ ।’
पार्टी एकताको खाका केवल एकताको लागि र सत्ता स्वार्थको लागिमात्र गरिने हो भने त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई दुरगामी परिणाम भोगाउन बाध्य पार्ने निश्चितै छ । चिनियाँ कम्युनिस्टहरु सत्ता स्वार्थ वा पार्टी भित्र प्राप्त गरिने अधिकार वा कार्यभार संग सदैब सचेत र सक्षम देखिन्छन् । मुलुकमा भएको चरम आर्थिक सामाजिक विकास संगै पार्टी भित्र पनि धेरै नै पदिय दायित्व बढ्दै जाने हुनाले मैले पद पाइन, मैले यति लामो सेवा गरे तर कुनै अवसर पाइन भने भावना हट्दै जान्छ । मुलुकको अहिलेको टड्कारो आवस्यकता आर्थिक फड्को मार्नु नै हो ।